Laga yaabaa 22, 2018 admin
bangiga Argentina ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay isticmaalaan Seeraar dhinca dhaqdhaqaaqa macaamiisha
Maanta Argentina ee Banco Masventas, oo shuraako la ah sarrifka Bitex, noqday bangiga ugu horeysay in ay isticmaalaan Seeraar dhinca dhaqdhaqaaqa macaamiisha dhabta ah, gaar ahaan lacagaha xuduudka isaga gudba.
Waxa ay u muuqataa in ay bangiga ugu horeysay gudaha ee dunida in ay oggolaadaan in macaamiisha si ay u isticmaalaan Seeraar sida xulashada lacag. Sida laga soo xigtay bangiga, macaamiisha hadda isticmaali kartaa Bitex u soo dirto lacag ka badan 50 dal oo kala duwan in ka yar 24 saacadood, lacag ah 3% +VAT.
Poland oo hakisay go'aanka macaamil cryptocurrency Qorniinkaas
Wasaaradda Maaliyadda ee Poland ayaa baahisay warbixin cusub oo ku saabsan sharciyada canshuuraha ee dalka.
Inta badan aad u macaaneyd ayaa isticmaala cryptocurrency Poland ee, canshuurta ku cryptocurrency ganacsiga ayaa si ku meelgaar ah u qaaday sida masuuliyiinta ay xaqiiqsadeen sida diiwanka iyo kuwa aan buuxin sharciyada canshuuraha waxay ahaayeen.
Suuqa Kraken Daily ...
Bithumb jabsaday, waayo, $...
Post Previous:Blockchain News 21.05.2018